March 6, 2020 - Tameelay
သူတဈပါးမကျြရညျကွီးငယျကပြွီးမှ စားရတဲ့ ထမငျးတဈနပျကတော့ အငျမတနျမှကို ပူလောငျရပါတယျ ။
March 6, 2020 Tameelay 0
ကိုယျ့ထကျ မွငျ့တဲ့လူတှနေဲ့ တှတေ့ာအခါ အားကပြါ မနာမလိုပါနဲ့ နောကျဆုံး မုဒိတာ မပှားနိုငျရငျတော့ ဘာကိုမှ မမွငျသလိုနပွေီး ဘာမှ မပွောဖွဈလိုကျတာက ပိုပွီးတော့ ကောငျးပါတယျ ။ ကိုယျတှေ ရှငျသနျနရေတဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ကိုယျ့ထကျသာရငျ မနာလိုမယျ့လူတှခေညျြးပဲ မြားတယျ အဲ့ဒီလူမြိုးထဲ ကိုယျမပါဖို့က အဓိကပဲလေ မဟုတျလား […]
March 6, 2020 yoon waddy 0
သွားနာတာ၊သွားဖုံးသွေးယိုတာဟာ အဖြစ်များတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သက်သာပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုကုသရမလဲဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူနည်းပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင်တော့ သွားဆရာဝန်နဲ့ပြပြီး သေချာကုသသင့်ပါတယ်။ တကယ်လိ့ဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ဆား ပင်လယ်ဆားက သွား၊ သွားဖုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ သွားနာတာ၊ သွားဖုံးသွေးယိုတာတွေဖြစ်နေတဲ့အခါ ရေနွေးအဖြူတစ်ခွက်ထဲ ဆားတစ်ဇွန်းထည့်မွှေပြီး တစ်နေ့သုံးကြိမ်ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။ သွားနာတာ၊ သွားဖုံးသွေးယိုတာ […]
ဘဝမှာရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ လမ်းပျောက်နေတဲ့သူလေးတွေဖတ်ဖို့ ….
လူတိုင်းက ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီနဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဘဝကြီးကိုငြီးငွေ့ပြီး ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိ လမ်းပျောက်နေသလိုမျိုးဖြစ်ဖူးပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီလိုအချိန်ဟာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ သင်ကောင်းကောင်းနားလည်မှာပါ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊ ဘာမှလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ ဒီအချက်လေးတွေကို လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် လမ်းပျောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေ ပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာမှာပါ။ သင့်ကိုစိတ်ဖိစီးစေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောင်ပါ ကိုယ်တိုင်က ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိ ရည်မှန်းချက်ပျောက်နေချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေထပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် အခြေအနေကပိုဆိုးသွားပြီး ထစ်ခနဲရှိစိတ်တိုဒေါသထွက်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင် […]
တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာ တခါတရံမှာအတော်လေးအံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။တိုင်ပင်မထားဘဲ ကိုယ်ဝတ်လာတဲ့ အဝတ်အစားအရောင်အတိုင်း သူငယ်ချင်းကလည်း ဝတ်လာတာမျိုး၊ မချိန်းထားပါဘဲ ကိုယ်တွေ့ချင်တဲ့သူနဲ့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် တွေ့တာမျိုး စသဖြင့်ပေါ့။ ဒီတစ်ခါပြောချင်တာက တစ်နေရာရာကိုကြည့်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာ 111 ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 111 ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကို ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီအချက်တွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာ သတိရလိုက်ပါ။ မကြာခင်မှာ သင့်ဘဝအတွက်အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ် ဒီလိုမျိုး […]
ကြှနျမ . . . တဖွေးဖွေးနဲ့ ဒဏျရာကငျးအောငျ တညျတညျတံ့တံ့လေး နထေိုငျတတျလာရုံပါ ။
ဆငျးရဲလို့လဲ အခြိနျ နညျးမသှားသလို ခမျြးသာလို့လဲ အခြိနျကိုတှမေရပါဘူး
ဘယျလောကျပဲခဈြခဈြ အခြိနျတနျရငျ ပွတျမှာပဲဆိုတဲ့ အကွညျ့တှကွေားမှာ တှဲထားတဲ့ လကျတှလေဲ မွဲပါစေ
ကွငျနာခငျြယောငျတော့မဆောငျနဲ့ အပျေါယံတှကေို ကြှနျမ မုနျးတယျ ။
ကိုယျလုပျတဲ့အလုပျတှမှေနျသမြှ စတေနာကောငျးကောငျးနဲ့ လုပျဖို့ လိုအပျတယျ။
ကိုယျ့ဘကျက အကောငျးဆုံးပေးဆပျခဲ့တဲ့အတှကျ လမျးခှဲခွငျးတိုငျးမှာ လိပျပွာသနျ့ပါတယျ ။
အရငျလို ပွုံးဖို့ဆိုရငျ အရငျတုနျးကလို ပြျောနဖေို့လိုတာလေ ။ ကြှနျမ ပြျောမှ မပြျောတာ ။
သူစိမျးကောငျးရငျ တကယျကို ဆှမြေိုးတှထေကျ သာပါတယျ ။
ခဈြခွငျး မုနျးခွငျးသံသရာမှာ တကယျ့ကို ပငျပနျးနပေါပွီ
ကြှနျမ မကျခဲ့တာ ငှမေဟုတျဘူး ။ ကြှနျမ မကျခဲ့တာ မတ်ေတာတရားတှပေါ ။
လိုခငျြတာတော့ ရပါရဲ့ လိုအပျတာတှေ အားလုံး ပေးဆပျပွီးမှ ရလာတဲ့ လိုခငျြတာလေးက ဘဝမှာ ဘာမှ သုံးစားလို့ မရတတျဘူးလေ ။
အိမျထောငျတဈခု တညျဆောကျဖို့ဆိုရငျ ကလေးအတှေးအရငျဆုံး ထားပဈခဲ့လိုကျပါ ။
ကြှနျမ မကျခဲ့တာ မတ်ေတာတရားပါ
့ပဈလိုကျမယျ ။ အရာရာကို ရငျဘတျကွီးနဲ့ရငျးပွီး ခဈြရ မုနျးရတာတှကေ တကယျ့ကို ပငျပနျးလှနျးပါတယျ ။
ညအိပ်ခါနီး ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်တွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့အကျင့်ကို ပြင်ပါ